Itoobiya: Jowhar Mohamed oo la xiray - Tilmaan Media
Waxaa xabsiga ladhigay Jowhar Mohammed oo ah hogaamiye siyaasadeed oo mucaarad ku ah xukuumadda raysal wasaare Abiye Ahmed. Sidoo kale waxaa iridada la isugu dhuftay Shabakadada Wararka ee Oromiya (OMN) oo Jowhar madax kayahay.
Xiritaankan ayaa imaanaya kadib mudaharaadyo kadhashay dilka fannaanka caanka ah ee oromada kasoo jeeda Hachalu Hundessa lagu khaarijiyay caasimadda dalkaas ee Addis ababa. Heesaagaan ayaa ahaa heesaa ay dadka Oromada ahi aad u jeclaayeen, wuxuuna heesihiisa u adeegsan jiray kicinta dadka Oromada ah iyo muujinta dulmiga ay ku hayyeen dowladihii ka jiray dalkaas.
Johwar ayaa waxaa lala xiray Bekele Gerba, oo isaguna kamid ahaa mucaaradka Itoobiya kuwooda ugu magac dheer. labada nin ayaa marka la xirayay waxay ka qayb qaadanayeen munaasabad tacsi ah oo loo dhigay heesaaga.
Qoraal kooban oo lasoo dhigay barta Facebook ee OMN ayaa lagu sheegay in ciidamo federaal ah ay xireen hawlwadeenada shabakadda OMN. Sidoo kale xafiisyada OMN ee Addis Ababa waxaa la wareegtay dowladda.
Ma ahan markii ugu horaysay ee Jowhar iyo dowladda uu hogaamiyo Abiye Ahmed isku dhacaan. Sanadkii hore Octobor,2019 ayay ahayd markay dowladdu damacday inay xirto laakiin go,aanka laga laabtay kadib markii dad taageerayaashiisa ahi isku wareejiyeen si ay u difaacaan.
Taageerayaasha Jowhar ayaa dowladda ku eedeeyay in ay doonaysay in Guriga Jowhar ee Addis Ababa laga dulqaado waardiyiihiisa gaarka ah si loo xiro ama loo khaarijiyo. Mudaharaadyo rabshado watta oo arrinkan ka dhashay ayaa waxaa ku dhintay 16 qof.
Dhacdooyinkaan u dambeeyay ayaa laga yaabaa in ay oga sii daraan xaaladda Itoobiya oo awalba la ciirciiraysay ismariwaa siyaasadeed iyo dhaqaale xumo.